Myanmar Buddhists are going to destroy Buddhism with the practice of Bid‘ah and SHIRK | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« “စစ်ခွေး”နဲ့ “ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲမှု”
There is no hope for Myanmar Education system »
In Islam, Bid‘ah is FORBIDDEN for PURITY and ORIGINALITY of religion….Even Buddhist monks are all Buddhists are NOW free to invent new laws or ways in Buddhism…Ultimated they are their own enemy to destroy Buddhism. Read more here in Wikipedia: Bid‘ah and SHIRK
Solonight Emparor wrote>
အချဉ် ဝီရသူ ခင်ဗျား ။ ဘယ့်နှယ့် ဘွဲ့ ထူး ဂုဏ်ထူး အသစ် တွေ ဖန်တီး ခွင့် ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ရှိလို့ လား ဖျာ့ ။သံဃာ နယာက တင်ပွဲ လုပ်မှသာ ဖြည့်စွတ် သင့်တာ ဖြည့် ။ဖြုတ်ချ သင့်တာ ဖြုတ် ချ တာကို သံဃာ တွေ ညှိုနှိုင်း ပြီး လုပ်ကြ တာ မဟုတ်လား ဖျာ့ ။
ဒါဟာ သာသနာ မှာ အသစ် တီတွင် မှု ဖြစ်မသွား ဘူးလား ဖျာ့ ။တပည့်တော် နားမလည် လို့ ပါ ဖျာ့ ။
Tags: Aung San Suu Kyi, Buddha, Buddhism, Daw Suu, Gautama Buddha, Islam, Muslim, Religion and Spirituality
This entry was posted on November 20, 2013 at 3:07 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.